Add new tag | GAZETY_ADALADALA
Natao maimaika loatra ny fametrahana ny rafitra fitsinjarana fahefana teto Madagasikara.
Mbola be no tsy mahalala ny fivadihan’ny faritany teo aloha ho fari-piadidiana. Izany hoe foana araka ny lalam-panorenana ny fisiany.
Ny teo aloha aza mbola tsy voafehin’ny sarambabem-bahoaka tsara dia efa ampidirina ny manaraka, ary dia toy izany hatrany. Tsy mba toy izay hita tany Eropa fony ry zareo hametraka ny fari-bola Euro, na ny momba ny espace Shengen. Efa nanomanana ela ny sain’ny olona ny amin’izany.
Ny eto Madagasikara indray kosa dia miova arakaraky ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana ny rivotra iainana sy ny lokon’ny lanitra lolohavin’ny ambanilanitra.
Nolalovana teto ny resaka faritany, nodimbiasan’ny faritany mizakatena, niverenan’ny hoe faritany , ary ankehitriny dia ny hoe faritra indray no malaza.
Very andro mitady ny very foana ny Malagasy. Tsy hainy intsony ny hoe iza,inona, nahoana, sy ny sisa. Tsy mbola hita sy hay izay rafitra tena mahametimety ny mpitondra tsirairay mahazo toerana eo, isak’izay misy fiovan’ny mpitondra fanjakana.
Tafiditra amin’io resaka io koa ry zareo mpampianatra, satria mbola maro no sahirana mamantatra ny hoe taranja hatraiza ary inona marina no tena atao ao anatin’ilay LMD? Inona no atao ao amin’ny Licence? Inona indray ao amin’ny Doctorat? Toy izay koa ny ao amin’ny Maîtrise. Koa raha izy mpampianatra aza fanina, dia mba ahoana ny mpianatra sy ny raiamandreny?
Tsy milaza akory ny mpanoratra eto hoe ratsy ny LMD an! Fa ny fahitana fotsiny hoe toa rehefa maheno ny rehetra miresaka eny rehetra eny ianao, dia zavatra tsy mbola vonona sy tsy voalanjalanja tsara ity tian-ko masaka sahady toy ny voalobo-jaza ity. Anisan’ny antony aroson’ireo mpampianatra moa ny tsy mbola fifanindran-dalan’ity rafitra Malagasy ity amin’ny fandaharam-pampianarana any ivelany any, ka ho lasa olana goavana ho an’ireo mpianatra Malagasy mandeha miondrana any ivelany aoriana kely ao.
Izao indray koa moa dia nanamafy ny Minisitra vaovao (RALAMBOMANANA Stangeline) voatendry hitondra ny resaka fampianarana fa tsy maintsy hapetraka ato ho ato ny fanalavana ny ambaratonga voalohany (Garabola) ho fito taona.
Dia ho sanatria ho ‘taranaka atao sorona’ (Géneration sacrifiée) indray ve ireo ankizy sy tanora manomboka hatreto? Ka ho lasa irony olona tsy hahay hamakafaka fa tonga dia hihianana am-bolony irony.
Raha mandinika tsara isika dia hahatsiaro fa ny sekoly Katolika dia « tsy nety loatra » nanaraka ambokony ireny fepetra sadasada naroso teo amin’ny sehatry ny fampianarana ireny, hany ka tsy mahagaga raha maro ny mpianatra avy amin’ireo sekoly tantanany no lasalasa daholo eo amin’ny sehatry ny fahalalana sy ny fandraharahana na fitantanana.
Tsy hoe manohitra ny rafitra akory ry zareo katolika raha manao izany fa kosa mahita hoe misy lalana tsaratsara kokoa hitany hampandroso ny mpianany ary dia raisiny amim-pahasahiana, rehefa hitany fa tsy dia manohintohina loatra ny an-drafanjakana. Ohatra fotsiny izao ity iray ity; manan-janaka mianatra izahay iray tokontany ato an-tanana, ny sasany mianatra amin’ny fanjakana, ny hafa indray mianatra amin’ny sekoly katolika. Betsaka kokoa ny fotoana ianaran’ny mpianatra katolika noho ny an’ny fanjakana. Izany hoe ireny andro tsy fianarana ireny dia lava loatra ho an’ny mpianatry ny fanjakana (toy ny araraotina mihitsy mba ho lava!), nefa kosa iny no araraotin’ny toeram-pampianarana kosa hanovozana fahaizana araka izay tratra. Tsy maty antoka kosa aloha ny raiamandreny mandoa vola amin’izay lafiny izay e. Na ny fanarahana ftsipika aza dia efa isehoan’ny tsy fitoviana eo amin’ireo lafiny roa lazaiko ireo.
Tantara lava raha ho itarina fa izay ny amin’iny. Mbola ho avy eto ny FOMBA FIJERY_2.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Add new tag, adina, fampianarana, fiantsoana, garabola, LMD, politika, tandrevaka |	Leave a comment »
Olona tsy hita nanjavonana
Posted on 22/04/2008 by gazetyavylavitra
Lahatsoratra avy any Egypta no nanaitra ny aingam-panahy hitosaka eto androany. Nanampy trotraka koa moa ny fandrenesana isan’andro isan’andro ao amin’ny RNM (Radiom-pirenena Malagasy) ny antso fiaraha-mitady olona tsy hita hoe lasa aiza na lasa aiza.
Ekena aloha fa misy ireo maty an-dalana noho ny hanoanana, noho ny aretina, noho ny lozam-pifamoivoizana nefa tsy nahitàna taratasy milazalaza ny momba azy teny amin’ilay olona. Nefa koa betsaka ny fakàna an-keriny sy ny famonoana any anelanelany any. Misy amin’izy ireny no ariana any anaty rano ka amatorana vatobe mba tsy hpoitra (nefa mbola naloan’ny rano ihany toy ilay Karana lahy teny Andranobevava), misy ny alevina an-tsokosoko any (toy ilay teny Ambohimanambola, momba ireo mpifankatia nanao anton’asa ny fanentanana lanonana, nonina teny Tanjombato, ary novonoin »‘ny namany ihany), ary misy koa moa ny tranga izay tsy haintsika hazavaina mihitsy.
Angamba efa tokony ho lavitra be ny fahatsiarovana izany andron’ny Gestapo sy ny fanjavonana noho ny antony pôlitika, na ny tsy fifanarahan-tsaina izany e! Ny hevitra ampiadiana dia atao toy ny ‘katsaka anaty lapoaly, ka izay tsy mahatanty mipitsika’. Sa ahoana hoy ianareo? Mitory fahambanian-tsaina mantsy izany amiko, ary midika tsy fahazakàna fahalalaham-pitenenana ihany koa.
Enga anie mba tsy hisy eto Madagasikara izay miseho any Egypta any. Hiaraka hivavaka isika hoe:
‘Zanahary ô tahio ny tanindrazanay, ….handry fahizay…..ireo mpitondra anay tariho lalandava koa, ho feno fahendrena, kinga sy mahay….’. Amen
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Add new tag, Egypta, fanjavonana, Madagasikara, tsy hita |	Leave a comment »